Zaza mivadi-tongotra Tsy fantatra ny anton’ny 80 %-n’ireo tranga misy
Zaza iray amin’ny 500 isa vao teraka no fantatra fa mivadi-tongotra eto Madagasikara. Hatreto dia mbola tsy fantatra ny 80 %-n’ny mety ho mahatonga izany raha vokatry ny aretina mandritra ny fotoana hitondran’ny Renim-pianakaviana iray vohoka kosa ny 20 % ambiny.
Tsotra ny fitsaboana ity mivadi-tongotra ity, raha araka ny fanazavan’ny dokotera Soloarivelo, lehiben’ny ivon-toerana fanamboarana solon-tongotra eo anivon’ny CHRD Itaosy, indrindra raha vao teraka ny zaza iray dia efa entina manatona ireny ivon-toerana ireny fa tsy andrasana efa lehibe. Enina ka hatramin’ny valo herinandro mantsy raha nambarany no hampanovina platra ny zaza iray. Asiana fitaovana ny tongony aorian’izany izay efa nohamaivanina tanteraka ny fandraisan’anjaran’ny Ray aman-dReny ary arahi-maso ny fivoaran’ny tongotr’ilay zaza mandrapahafenony dimy taona. Na izany aza anefa hoy ity dokotera ity dia tsy mitovy ny tongotra mivadika hatrany an-kibo sy ny tongotra ara-dalana, indrindra fa ny resaka pointure. Anisan’ny manampy betsaka ireny ivon-toerana mandray an-tanàna ny zaza mivadi-tongotra ireny ny “Miracle feet” sy ny “fondation telma”. Zaza miisa 500 hatreto no efa nahazo tombontsoa raha araka ny fanazavan-dRabenindray Sendrarisoa avy amin’ny Miracle feet. Nisy omaly ny fifanakalozan-kevitra nentin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny niresaka manokana ity mivadi-tongotra ity, hahafahana mampitombo ny tahan’ireo Ray aman-dReny manan-janaka lasibatra manatona ireny ivon-toerana voatokana ireny.